Shina baomba fanariana baomba sy fanamboarana baomba | Heweiyongtai
Fanaraha-maso ny filaminana
Vahaolana fanoherana ny fampihorohoroana
Ny mari-pankasitrahana anay
Momba ny ekipa
Fikarohana porofo ara-batana amin'ny alàlan'ny Spectrum Ultra-wide Spectrum ...
Detector tsy misy Linear
Fakan-tsary fikarohana Telescopic IR
Detector ranoka mampidi-doza
MODY DUAL EXPLOSIVE & DUTECTOR DADECTOR
Rafitra Scanner X-ray azo entina HWXRY-03
Detector an'ny mine
Jammer baomba marobe an-tariby
Akanjo fanariana baomba
Ity karazan'akanjo baomba ity dia natao ho fitafiana akanjo manokana indrindra ho an'ny Filaminam-bahoaka, sampana polisy mitam-piadiana, ho an'ireo fitafiana anaovan'ireo mpiasa hanonganana na hanary ireo zavatra poapoaka bitika. Izy io dia manome ny fiarovana avo indrindra ho an'ny olona amin'izao fotoana izao, na dia manome ny fampiononana sy ny fahafaha-mihetsika ambony indrindra ho an'ny mpandraharaha aza izy io. Ny akanjo mangatsiaka dia ampiasaina mba hanomezana tontolo iainana azo antoka sy mangatsiaka ho an'ireo mpiasa manapoaka fipoahana, hahafahan'izy ireo manatanteraka asa fanariana mipoaka amin'ny fomba mahomby sy mahery.
Ity karazan'akanjo baomba ity dia natao ho fitafiana akanjo manokana indrindra ho an'ny Filaminam-bahoaka, sampana polisy mitam-piadiana, ho an'ireo fitafiana anaovan'ireo mpiasa hanonganana na hanary ireo zavatra poapoaka bitika. Izy io dia manome ny fiarovana avo indrindra ho an'ny olona amin'izao fotoana izao, na dia manome ny fampiononana sy ny fahafaha-mihetsika ambony indrindra ho an'ny mpandraharaha aza izy io.
Ny akanjo mangatsiaka dia ampiasaina mba hanomezana tontolo iainana azo antoka sy mangatsiaka ho an'ireo mpiasa manapoaka fipoahana, hahafahan'izy ireo manatanteraka asa fanariana mipoaka amin'ny fomba mahomby sy mahery.
Izahay dia mpanamboatra ao Shina, ny orinasanay dia manana fahaiza-manao famokarana mifaninana. Izahay dia matihanina ary afaka manome vokatra 100 napetraka isam-bolana, alefa ao anatin'ny 20 andro fiasana. Ary mivarotra entana mivantana amin'ny mpanjifantsika izahay, afaka manampy anao amin'ny famoahana ny fandaniana eo anelanelany izany. Mino izahay amin'ny herinay sy ny tombotsoanay, afaka manome mpamatsy mahery anao izahay. Ho an'ny fiaraha-miasa voalohany dia afaka manolotra santionany aminao izahay amin'ny vidiny ambany.
Data ara-teknikan'ny baomba baomba
Fangaro mangarahara organika
Helmet amin'ny bala
361 × 273 × 262mm
Voaravona ny fitambaran'i Kevlar
Ny eo alohan'ny smock
580 × 520mm
Lamba tenona 34 sosona (fibre Aramid)
Takelaka fipoahana + Ny eo alohan'ny smock
Tebaky ny takelaka
270 × 160 × 19.7mm
Ny lanjan'ilay takelaka
Refin'ny takelaka kibo
330 × 260 × 19.4mm
Ny lanjan'ireo takelaka
Sandrina (Sandriny ankavanana, Sady ankavia)
500 × 520mm
Lamba tenona 25 sosona (fibre Aramid)
Ny lamosin'ny feny sy ny zanak'omby
(Kavina ankavia sy ankavanana,
Shin havia sy havanana)
Lamba tenona 21 sosona (fibre Aramid)
Ny eo alohan'ny shin
(Havia sy havanana ivelany)
Lamba tenona 30 sosona (fibre Aramid)
Baomba baomba lanja tanteraka
rafi-pifandraisana tariby, mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny rafi-pifandraisana
200 litatra / min, hafainganam-pandeha azo ovaina
Fitaovana fonosana nampangatsiaka rano
Parameter Ballistic (fitsapana V50)
Ny eo alohan'ny smock (Vatana lehibe an'ny smock)
(Havo havia sy havanana, havia havia sy havanana)
Ny eo alohan'ny shin (Ankavia sy ankavanana any ivelany)
Bombin'ny antsipirian'ny baomba
Previous: Barile-porofo mivaingana
Manaraka: Jammer baomba marobe an-tariby
Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. dia mpamatsy lohan'ny vahaolana EOD sy Security. Ny mpiasanay dia matihanina ara-teknika sy mpitantana mahay rehetra hanome anao serivisy mahafa-po.
Ny vokatra rehetra dia misy tatitra momba ny fanadinana arak'asa ho an'ny firenena ary fanamarinana fahazoan-dàlana, noho izany azafady mba alao antoka ny hanafatra ny vokatra.
Fanaraha-maso ny kalitao henjana mba hiantohana ny fiainana serivisy sy ny mpandraharaha maharitra miasa soa aman-tsara.
Miaraka amin'ny traikefa amin'ny indostria mihoatra ny 10 taona ho an'ny EOD, fitaovana fanoherana ny fampihorohoroana, fitaovam-pitsikilovana sns.
Nanompo tamina firenena maherin'ny 60 mpanjifa eran-tany izahay.
Tsy misy MOQ ho an'ny ankamaroan'ny entana, fandefasana haingana ho an'ny entana namboarina.
Akanjo fanariana baomba ataon'ny tafika
Palitao famonoana baomba
Baomba fanariana baomba Bulletproof
Akanjo akanjo fanary baomba
Baomba fanariana baomba Eod Suit
Ny lanjan'ny baomba fanariana baomba
Palitao fanariana baomba Eod
Fitaovana fanariana baomba Eod
Baoty fanariana baomba Locker Hurt
Med-Eng Eod 9 Baomba fanary baomba sy Helme
Akanjo famonoana baomba miaramila
Akanjo fanipazana baomba ady maoderina
Kitapo famonoana baomba sy faribolana fiarovana
Fanaparitahana fitaovana maloto
Kitapo fitaovana tsy andriamby 36-Piece
Kaontenera famoretana baomba amin'ny spherical
Adiresy: No.113, Gucheng West Road, Distrikan'i Shijingshan, Beijing, Sina
Scanner X-Ray Portable, Masinina scanner X-Ray azo entina, Rafitra fizahana fiara fitaterana finday, Fakan-tsary fakan-tsary, Rafitra fitiliana fiarovana X-Ray azo entina, Fitaratra fitiliana fiara,